My freedom: Veganniversary: One year Vegan experience
Veganniversary: One year Vegan experience
ဒီနေ့က ကန်ဒီ့အတွက် အရမ်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ နေ့လေးတနေ့ပါ။ ကန်ဒီသက်သတ်လွတ်စားတာ တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့လေးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ အတိအကျပြောရရင် ကြက်ဥနဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေပါရှောင်တဲ့ Strict Vegetarian (Vegan)... အသွေးအသားရှောင်သက်သတ်လွတ် တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ပေါ့နော်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မနှစ်ကဒီနေ့မတိုင်ခင် ကန်ဒီအရင် သက်သတ်လွတ်စားတာ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမရှောင်ရသေးလို့ပါ။ ဒီ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်တဲ့ Anniversary လေးဟာ သူများတွေအတွက် ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် ကန်ဒီ့အတွက်တော့ တကယ်စိတ်ထဲကြည်နူးရပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် တစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့အသက် ပျက်စီးယိုယွင်းမှုမပါဘဲ နေလာတာ တစ်နှစ်တောင် ရှိပြီပဲဆိုတဲ့ ကြည်နူးမှုဟာ ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူး။ ဒီနေ့ ဒီပိုစ့်မှာ တစ်နှစ်တာ သက်သတ်လွတ်စားလာခြင်းရဲ့ ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုး ကန်ဒီ့အတွေ့အကြုံလေးကို ရေးပြချင်ပါတယ်။
♥ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတချို့
ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာ ဒွန်တွဲနေသလို ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကန်ဒီ့အတွက် တစ်ခုတည်းသော အခက်အခဲကိုပြောပြရရင် အပြင်သွားတဲ့အခါ စားစရာ ရှာရခက်တာပါ။ Vegetarian ဆိုင်မတွေ့ရင် စားဖို့မရှိတော့ဘူးပေါ့။ Vegetarian ဆိုင်တွေ့ရင်တောင်မှ တချို့က နို့နဲ့ကြက်ဥပါတော့ အရင်ကြည့်ရတာပေါ့။ ဆိုင်မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ အသီးအနှံတွေ စားလို့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Vegetarian ဆိုင်တွေမှာ ဟင်းတွေက ဆီအရမ်းများတယ်။ ကန်ဒီက ဟင်းကိုဆီများရင် မစားတတ်ဘူး။ တခါတလေဆို စားလို့ရပေမယ့် နေ့တိုင်းဆို မစားနိုင်တော့ဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် ကန်ဒီကိုယ့်ဟာကိုယ် ချက်စားတာများတယ်။ အလုပ်ကိုလည်း အမြဲ Lunch Box ယူသွားတယ်။ ခရီးသွားရင် တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်။ ရိုးရိုးစားသောက်ဆိုင်တွေမှာ Vegetarian version လုပ်ခိုင်းရင် အမြဲ ထမင်းကြော် (သို့) ခေါက်ဆွဲကြော် (သို့) အရွက်ကြော်ပဲ။ ခရီးစဉ်တလျှောက်လုံး ဒါကြီးစားနေရတော့ လူကဘယ်လိုမှ မစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့။ ဘာလီသွားတုန်းက တော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါတော့ ဘာလီပိုစ့်မှ ဆက်ပြီး Complain တက်မယ်နော် ဟဟ။ ကန်ဒီ့အတွက် အဓိက အခက်အခဲကတော့ အဲ့ဒီတစ်ခုပါပဲ။ ဒီအခက်အခဲဆိုတာကလည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဘယ်သွားမယ် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာသိရင် ကြိုပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။ ဥပမာ မသွားခင်စားသွားတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် စားစရာတစ်ခုခု ယူသွားတာမျိုးပေါ့...
♥ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ကောင်းကျိူးများ
သက်သတ်လွတ်စားခြင်းအတွက် ကိုယ်တိုင်ခံစားရတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကတော့ အများကြီးပဲပေါ့။ ကန်ဒီသတိထားမိတာက ထမင်းတွေ ဟင်းတွေ အများကြီးစားပြီးလည်း လူကအိပ်ငိုက်တာမျိုး၊ ဗိုက်မအီမသာဖြစ်တာမျိူး လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ အများကြီးစားမိတဲ့အခါ ဗိုက်ပြည့်တဲ့ ခံစားမှုမျိုးတော့ ရှိတယ် (ဗိုက်ပြည့်တာနဲ့ မအီမသာဖြစ်တာ မတူဘူးနော်)။ ဗိုက်ကြီးအင့်ပြီး နေထိုင်မကောင်းတာမျိုး မရှိတော့ဘူး။ သက်သတ်လွတ် စစ,စားချင်းမှာ အရင်ထက် အသီးအရွက်တွေ ပိုစားတဲ့အခါကြတော့ ဗိုက်က ဒီ Fiber တွေကို ကျင့်သားမရသေးတဲ့အချိန်မှာ တခါတလေ လေထတယ် (အထူးသဖြင့် အသီးအရွက်တွေ အများကြီးစားပြီးရင်)။ တစ်လနီးပါးလောက်ပါပဲ... ခန္ဓာကိုယ်က ကျင့်သားရသွားတော့ လေမထတော့ဘူး။
အရင်ကဆို အလုပ်ကပြန်လာရင် ကုတင်ပေါ်ပစ်လှဲပြီး ဖတ်ဖတ်မောနေတာ တော်ရုံနဲ့ မထဘူး။ တခါတလေ တမှေးလောက် ရသွားသေးတယ်။ အမေဆိုအမြဲပြောတယ်... ငါ့သမီးအလုပ်က ပင်ပန်းတယ်တဲ့။ ပြန်ရောက်တာနဲ့ အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်သွားလို့။ ကန်ဒီသက်သတ်လွတ်စားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အဲ့လောက်ပင်ပန်းတာမျိုး မရှိတော့ဘူး။ နေ့တိုင်းနီးပါး အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ စားစရာပြင်ဆင်ဖို့တောင် အင်အားတွေ သူ့အလိုလိုရှိနေတာ။ ကုတင်ပေါ်လှဲပြီး မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားတာလည်း မဖြစ်တော့ဘူး။ အမြဲတမ်း အဲ့လိုအားတွေပြည့်နေတယ်တော့ မပြောလိုပါဘူး။ မိန်းကလေးဆိုတော့ ရာသီလာခါနီးအချိန်မျိူးဆိုရင်တော့ နုံးပြီးအားမရှိတာမျိုး ဖြစ်တာပေါ့။
တဆက်တည်း ဆက်ပြောရရင် နားနဲ့မနာ ဖ၀ါးနဲ့နာပါ။ အရင်က ကန်ဒီရာသီမမှန်လို့ Raspberry Leaf Tea သောက်ရတဲ့ ပိုစ့်လေးတောင် ရေးဖူးတယ်။ အခုဆို လစဉ်မှန်မှန်လာတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့လတွေဆိုရင် နောက်ကျတာမျိုးတော့ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အရင်ကလို နှစ်လ သုံးလနေလို့ မလာတာတွေ မဖြစ်တော့ဘူး။
လက်သည်းတွေ ဘေးနားကနေ အက်လာလို့ ကပ်ပြီးညှပ်လိုက်ရတာမျိုး ဖြစ်ဖူးလား? ကန်ဒီဆို အရင်က တခါတလေ အဲ့လိုဖြစ်တယ်။ ခုအဲ့လို လုံးဝမဖြစ်တော့ဘူး။ နောက်တစ်ခုက ကန်ဒီ့အသားအရည်... အရင်ကဆို ၀က်ခြံထွက်လွန်းလို့ ဆေးခန်းသွားပြပြီး ဆရာဝန်သောက်ခိုင်းတဲ့ အရမ်းပြင်းတဲ့ဆေးကို နှစ်ခါလောက် သောက်ရတာ အားလုံးအသိပါ။ ကန်ဒီ့အသားအရည်အကြောင်းပိုစ့်တွေလည်း ခဏခဏရေးဖူးတယ်။ ကန်ဒီအဲ့ဒီဆေးကို တစ်နှစ်လောက်သောက်ပြီး အဲ့ဒီတစ်နှစ်အတွင်း ၀က်ခြံလုံးဝပျောက်သွားတယ်လေ။ ဆေးရပ်လိုက်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ နဂိုအတိုင်း ၀က်ခြံတွေ ပြန်ထွက်လာတာနဲ့ နောက်တစ်ခေါက်သွားပြတော့လည်း ဒီဆေးကိုပဲ နောက်တစ်နှစ်နီးပါး ထပ်သောက်ရတယ်။ ကိုယ်ကလည်း Pharmacy မှာ အလုပ်လုပ်နေတာဆိုတော့ ဒီဆေးရဲ့ဆိုးကျိုးတွေ သိနေတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလလောက်မှာတော့ လုံးဝဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ ဖြစ်ချင်တာဖြစ် ဆေးလည်းမသောက်တော့ဘူး.. ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးလို့... ကုန်ကုန်ပြောရရင် ၀က်ခြံအတွက် လိမ်းဆေးတောင် ကန်ဒီမလိမ်းတော့ဘူး။ ကိုယ့်မျက်နှာကိုယ် အဲ့လောက် စိတ်ကုန်သွားတာ။ ၀က်ခြံပျောက်ဖို့ ဒီလောက်ပြင်းတဲ့ဆေးကို မှီခိုနေရတာလည်း မဟုတ်သေးဘူးလေ။
ဖြစ်ချင်တော့ ဆေးရပ်လိုက်ပြီး (၃)လလောက်အကြာမှာ ကန်ဒီအသားစ,မစားတော့ဘူး။ (၅)လလောက်အကြာ မနှစ်က ဒီအချိန်မှာ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေပါ ရှောင်လိုက်တော့ ဆေးရပ်လိုက်လို့ ၀က်ခြံက ပြန်တော့ထွက်တယ်.. ဒါပေမယ့် ဟိုးးအရင်ကလောက် မဆိုးတော့ဘူး။ အရင်ကဆို နာလို့မခံစားနိုင်တဲ့အထိပဲ။ အခုဆို ၀က်ခြံထွက်လည်း ဘာဆေးမှမလိမ်းတော့ဘူး။ မျက်နှာသစ်ဆေးဆိုလည်း ၀က်ခြံပျောက်ဆေးပါတာ မ၀ယ်ဘူး။ ၀က်ခြံနဲ့ပက်သက်တာတွေကို အကုန်စိတ်နာနေတာ ဟဟ။ အဲ့လိုဖြစ်သလိုထားမှပဲ မျက်နှာက နည်းနည်းသက်သာလာတယ်။ အလုပ်က လူတွေကလည်း ပြောတယ်။ ကန်ဒီက အသားထဲမှာပါတဲ့ ဟော်မုန်းတမျိုးမျိုးနဲ့ မတည့်တာ ထင်တယ်တဲ့။ သက်သတ်လွတ်စားပြီး ကန်ဒီ့မျက်နှာတော်တော် သက်သာလာတယ်တဲ့။ နောက် ဒီတစ်နှစ်ပြည့်ခါနီးမှာ ကန်ဒီသတိထားမိတာတစ်ခုက မျက်နှာအဆီပြန်တာ တော်တော်နည်းသွားတယ်။ အရင်ကဆို အလုပ်ရောက်တာနဲ့ ဆီစုပ်စက္ကူနဲ့ မျက်နှာသုတ်ရတာလည်း တစ်လုပ်... အခုဆို တနေ့လုံး ဆီစုပ်စက္ကူမသုံးရတော့ဘူး။ အသားအရည်နဲ့ ပက်သက်လို့ ပြောင်းလဲတာတွေကတော့ တစ်နှစ်လောက်နေမှ သတိထားမိတယ်။ စစ,စားချင်းမှာ ဘာမှ သတိမထားမိဘူး။
အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ စိတ်ကြည်လင်နေတာပါပဲ။ ထမင်းတစ်နပ်စားတိုင်း ကိုယ့်ကြောင့် မဆုံးရှုံးရတဲ့အသက်တွေအတွက် ပျော်ရွှင်ရတယ်။ အရင်ကဆို အစာစားတယ်ဆိုတာ အသက်ဆက်ဖို့ပဲ... တစ်ခါမှ အခုလိုမျိုး မတွေးဖူး၊ မခံစားဖူးဘူး။ အခုဆို စားဖို့ပြင်ဆင်နေရတာ၊ ဘာစားမလဲ စဉ်းစားနေရတာလေးကိုတင် တက်ကြွနေတာမျိုး။
ဒါတွေကတော့ ကန်ဒီ့တစ်နှစ်တာအတွေ့အကြုံလေးတွေပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ပြောင်းလဲမှုရှိလားမေးရင် (၂)ကီလိုလောက်တော့ ကျသွားပါတယ်။ အဲ့ထက်ပိုပြီး မကျတော့ပါဘူး။ ဘာလို့ကန်ဒီ သက်သတ်လွတ်စားလဲဆိုတာတော့ အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ "Vegan Story" ပိုစ့်လေးသီးသန့်တော့ ရေးချင်ပါသေးတယ်။
Vegan for the Voiceless^
Vegan for Life ^^
အစ်မ အခုမုန့်ဖုတ်သင်တန်းတက်နေတယ် Recipe တွေထဲမှာ Vegan ဆိုတောတွေ့ရင် ကန်ဒီ့ကိုသတိရမိတယ်..။ အရင်ကမသိတော့သက်သတ်လွတ်စားရင် ပေါင်မုန့်တွေဘာတွေစားလိုက်တာမျိုးရှိတယ်..။ တကယ်တော့ ပေါင်မုန့်ထဲမှာလည်း နို့တွေ ကြက်ဥတွေပါတယ်..။ Vegan အတွက် မုန့်တွေရှိတယ်..။ မုန့်ဖုတ်တဲ့ ပို့စ်တွေတင်ဖြစ်တဲ့အခါ ကန်ဒီ့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးဖို့ စဉ်းစားထားတယ်..။ Vegan သမားဖြစ်တဲ့ ကန်ဒီ့ကို ချီးကျူးပါတယ်...။ ပျော်ရွင်ပါစေ ညီမလေး..။
I am also trying to switch to vegan coz of hormone problems. I haven't decided it yet. Trying to consult with expert.
မမမိုးငွေ့ မုန့်ဖုတ်တဲ့ပိုစ့်တွေ တင်ပေးမယ်ဆိုလို့ အားရှိသွားပြီ Yayyyyy.... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမ.. ကိတ်မုန့်မစားရတာ တော်တော်ကြာသွားပြီ :( Banana Cake ကို Vegan version လေး လုပ်တတ်ချင်တယ်။ နို့မပါ ကြက်ဥမပါလေ။ ဟီးဟီး request က စလုပ်ပြီ :P
Bali: Monkey Forest and Tanah Lot Temple
Bali: Taman Ayun Temple and Ulun Danu Temple
Bali: Anahata Resort (Ubud)